Ujongana njani no-2020 - Khetha Uphawu
Ujongana njani no-2020
Ngobhubhani oqhubekayo, imida emitsha, iingcingo kunye nemigama, kwanabo babenethamsanqa lokufumana iimeko ezininzi ukuze bangafumani lula ukujongana neemvakalelo zeemvakalelo ngasemva. Into yokuqala ekufuneka uyikhumbule kukuba ngexesha lika-2020, ISaturn ibambe isidima sayo esiphezulu Capricorn kwaye inika isakhiwo esiqinileyo nesinempilo kuyo yonke imicimbi ekhoyo. Into edala ingxaki yokwenyani yeemvakalelo iwile Jupiter edibanisa nayo kuphawu lwe Inyanga elubhacweni, apho iimvakalelo zivalelwe kwaye iinyaniso kunzima ukuzibona. Injongo inokuziva ilahlekile kwaye ubuxoki buvela, nganye nganye. Ekuphela kwendlela yokujongana nalo mbandela kukubambelela kumathambo ethu, kwisakhiwo, kwinkqubo, kunye noko kusempilweni kwindlela yethu yesiqhelo. Kukho ulungelelwano oluphakamileyo esingenako ukuleqa.
Njengenqindi yokugqibela ngamaxesha okuwa Ilanga kunye nokuqala kwekwindla, Mars sijike ngasemva kwitshathi yethu esele ixakekile, sisenza izikwere kwiiplanethi zaseCapricorn kunye Pluto , ukunyanzela imiba engekho zingqondweni, eyemeko, neminyanya ukuba igxininise. Uloyiko luvuswa ngenjongo esele ibonakala ngathi ilahlekile, kwaye asinakukhetha ngaphandle kokujonga ngaphakathi. Apho besithembele kakhulu komnye, amabhondi aya kuqhawuka, kwaye akukho budlelwane kunye nemida ewelelweyo iya kuhlala ixesha elide. Amaxesha okuzigaqa aphezu kwethu, kodwa kwanamaxesha okukhulula kuyo yonke into endala, engeyiyo eyethu kuphela kwaye iyinyani. Owu, kwaye ukuba kuphela IVenus ayizange iwe ngokunjalo, kwaye IMercury kwimvelaphi yayo eqhelekileyo, ukubuya umva...
Ke, iMercury isixelela ukuba sijonge ngasemva okokugqibela, ukulungisa oko kwaphukileyo kwinqwelomoya, ukwenza izinto zibentle kwaye sijongane nokunganeliseki kwethu, oko kweVenus eyenza imibingelelo eninzi kakhulu Virgo , sigxeka kwaye sithelekisa undoqo wethu wokwenyani kunye noluntu lonke. Akukho mntu ukhuselekile kolu seto lwangoku kodwa sinenkxaso eyaneleyo ngeetrines zeVenus kunye nesondo esingaguqukiyo nesizinzileyo se Neptune kwi IiPisces , apho iinkolelo zokwenyani kunye neetalente zinokusikhokela kuphela ekuphumeni kobugxwayiba obudlulileyo kunye namandla abambekileyo akhwazayo ukuba ayeke. Kuya kufuneka uphelise iindlela kwaye uphilise iinkolelo ezimi endleleni yakho, zikubambezele, kwaye zikugcine ubotshelelwe kwimicimbi esele ihambile. Ilahleko kufuneka ibalwe ukuze ubomi buqhubele phambili kwaye kutheni ungakhethi ubomi endaweni yokubamba inzondo, ubambe usizi, ubambe ipateni, osindwayo? Nangona oku kulula ukukuthetha kunokukwenza, akukho sizathu sokuxhathisa umjikelo wemvelo wobomi apho kufuneka kuphele izinto ukuze kuqalise ezintsha.
Ekuphela KweSifundo Sokwenene
Ukuba u-Saturn kuphela kwequmrhu lethu eliqinisekileyo eliqhubekayo kulo nyaka, into kuphela esinokuzenzela yona kukuba sibe nomonde kwaye siphumle ngokwaneleyo. Buyela kwimicimbi yakho yakudala, buyela kubudlelwane kunye neemvakalelo ezingasonjululwanga, buyela ekhaya, buyela ukulungisa izinto ezifuna ukulungiswa, uhlaziye amandla abambekile kwaye abotshelelwe. Buyela kubantu kunye neendawo, amabali othando angazange afe ngokwenene, kwaye wenze ngokuzingca ngemilinganiselo yakho yokuziphatha ephezulu kunokuba uJupiter enikezela okwangoku. Kukho inyaniso ephezulu kunaleyo yokwabelana ngeenkolelo ezicwangcisiweyo zokulungileyo nokubi. Endaweni yalo naluphi na unqulo, wakhetha inkolo, engachukunyiswanga, enembono enqwenelekayo, nobuntwana.
Kwakhona, ungalibali ukuba unokwenza into enexabiso elikhulu kuye wonke umntu - nyaniseka. Nangona ingeyiyo yonke into efuna ukwabelwana kwaye imida enempilo kufuneka ihlonitshwe, unamandla okunika abanye inyaniso yakho kunye neemvakalelo zakho zokwenyani eziye zavalelwa. Oku kufuna ukuba uzinike imvume yokuziva ngendlela oziva ngayo, ukukhetha oko ukhethe ngasese, kwaye ukuxolele ngokuba yiloo nto uyiyo ngokwenyani. Inkululeko inyanzelekile kwaye nokuba awuyikhethi ngoku, iJupiter kunye neSaturn Aquarius iya kukukhethela yona ekuhambeni konyaka ka-2021. Unxibelelwano kufuneka lwehle ngokwenene ekubeni sesichengeni ukuze umbono kunye neenkolelo zomntu wonke zibonise. Nangona oku kusenokuba buhlungu kunxibelelwano, kwenza indawo yezigqibo eziphilileyo eziya kukwahlukanisa nabantu abangasenabo ubomi bakho okanye abo bangakuboniyo ncam, kodwa endaweni yoko baleqa ezabo iingqikelelo.
Kungekudala, le meko iqhelekileyo iya kuphela, nangona isenokubonakala ingapheli kule mbono. Ukudinwa kuyinxalenye yendalo yenkqubo edibeneyo kwaye okukhona siphumla, kokukhona kuya kuba phezulu ukuqonda ngokubanzi. Philisa umzimba wakho, camngca, phumza izihlunu zakho kunye nesifuba sakho, zibophelele kwindlela evumela ukuba i-spasms iphele kunye nexhala lokucofa, ukuhamba, kunye nokusebenza kwimiba oyithandayo. Mhlawumbi le kuphela kwendlela ekufuneka iphunyezwe kwangoko, kwaye mhlawumbi yonke eminye imiba ebomini inokulinda kude kube nguDisemba.
Sagittarius Leo Gemini Aries Khetha Uphawu